Ungakha kanjani ama-backlink aphezulu wekhwalithi?
Ezinsukwini zethu, abanikazi bewebhusayithi baphoqeleka ukuba balwele izikhundla eziphezulu ekhasini lokusesha njengoba amaphesenti omncintiswano aphezulu kakhulu. Ukuze kubonakale phakathi kwezindawo eziningi ezihlobene niche, udinga ukwakha umkhankaso wokwenza umsebenzi wokunqoba futhi udale iphrofayli yokuxhumanisa yekhwalithi. Kusukela esikhathini sokugcina se-Google rankings update, kwaba kancane kancane nzima ukwakha izixhumanisi kusayithi lakho. Namuhla, i-Google ihlola ngokucacile ikhwalithi yezixhumanisi ezingenayo, ibonga kuphela lezo zinkambulelo ezivela emithonjeni yewebhu egunyaziwe. Yingakho bonke abakwa-webmasters abheke phambili kufanele baqaphele ukuthi bangakha kanjani ama-backlink ukuze bathole ukusebenza kahle kakhulu. Kulesi sihloko, sizoxoxa ngezindlela eziphumelelayo zokuthola ubuhle obuhle be-backlink kanye nezici ezingakusiza ukuba ukhulise inani lezixhumanisi ezingenayo.
Izindlela zokuthola ama-backlink quality aphezulu
Ama-Backlink kusuka emithonjeni yewebhu ehloniphekile
isici esinqumayo ikhwalithi yezixhumanisi ezingenayo yisigunya semithombo lapho lezi zixhumanisi ziyeza khona. Isibonelo, uma une-backlink eziningana eziningana ezivela emithonjeni yamandla ephezulu ye-web bazokulethela ijusi lokuxhumanisa ngaphezulu bese kunezixhumanisi eziningi ezivelayo kusuka kumawebhusayithi aphezulu. Kungachazwa ngokuqwashisa kwe-Google ngekhwalithi yokuqukethwe noma izixhumanisi eziphumayo kusuka kumasayithi anjalo ahloniphekile. Ngaphandle kwalokho, izici ezimbili ze-Google zibeka ikhwalithi yemithombo ye-web - Ikhasi lesigunyaziso ne-Domain Authority. Uma umthombo wewebhu unama-metric ephezulu we-PA ne-DA, i-Google izoyibeka phezulu ku-SERP, ikunikeze ukwethenjwa okuthe xaxa. Uma izixhumanisi zakho ezingenayo zivela kulolu hlobo lwamasayithi, zizoletha ijusi lokuxhumanisa eliphezulu kumakhasi akho ewebhu. Ukuze uhlole ukuthi izixhumanisi zakho zibeka emithonjeni yewebhu egunyaziwe noma cha, ungasebenzisa ithuluzi le-Semalt Web Analyzer.
Ama-backlink kusuka kumakhasi aphezulu e-PR
I-PageRank (PR) isebenza njengesilinganiso sokuhlola simo ngasinye sewebhu kuma-search kuboniswe yi-Google. Amasayithi afaka kwi-TOP anenani elingaphansi kwe-9PR futhi anelungelo elikhulu kubasebenzisi. Kusukela ngo-2012 i-PageRank ayinamandla kangako ngaphambili, kodwa isebenza njengezinga elijwayelekile lokuhlola ikhwalithi yomthombo web kanye nedumela layo kubasebenzisi nabasebenzisana nomkhakha. Ngokuzenzakalelayo, ama-backlink kusuka kumawebhusayithi angu-9 noma angu-10PR afana ne-Wikipedia, i-YouTube, i-Facebook, nokunye okunye, angaletha ijusi lokuxhumanisa eliphezulu kumakhasi akho esayithi. Noma kunjalo, akulula ngaso sonke isikhathi ukuthola izixhumanisi ezingenayo kusuka kulolu hlobo lwemithombo yewebhu. Kodwa-ke, kunezindlela ezithile ezikhohlisayo ongayisebenzisa (ungafunda ngazo esihlokweni sethu sangaphambilini "Indlela Yokuthola Uhlu Lwenziwe Ngokulandela I-Backlink For Free?"). Ngincoma ukuthi ungasichitha isikhathi sakho ekuzameni ukudala izixhumanisi kumawebhusayithi amasha we-N / A PR noma awungafaneleki kumasayithi wakho we-PR aphansi kakhulu.Ngeke uthole imiphumela emihle kulo futhi uphakamise ukulungiswa kwe-Google esizindeni sakho.
Ama-Backlink kusuka kumakhasi afanayo okuqukethwe
Uma ungakwazi ukwakha izixhumanisi zakho kumawebhusayithi aphezulu we-PR, udinga okungenani ukuyidala kumasayithi ahlobene niche ngokuqukethwe okufanayo isihloko. Isibonelo, uma ibhulogi yakho iphathelene nokwenza ngcono injini yokusesha, izixhumanisi zakho kumabhulogi wokukhangisa zizobukeka zemvelo. Ngisho noma ibhulogi inegunya eliphakathi, ama-backlink akho azohlolwa njengento efanele nekhwalithi. Yingakho ngaphambi kokuseka ubuhlobo bomlingani namanye amawebhusayithi noma amabhulogi, qiniseka ukuthi okungenani ubhekisela embonini yakho Source .